Ukuphupha ngokuthunga Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukusebenza ngenaliti kunye nomsonto bubugcisa bokwenyani kwaye budinga ubuchule kunye netalente. Nabani na okwaziyo ukuthunga okanye ukuhombisa uyile kwaye unakho ukuguqula izimvo kunye nemibono kwizinto ezintle. Nokuba ziingubo, iingxowa, iingubo okanye izinto zokuhombisa, ngoncedo lomatshini wokuthunga, ukucinga akukho mda. Sisebenzisa inaliti xa sifuna ukulungisa into kuba kulungile kakhulu ukuba siyilahle okanye kuba into esiyithandayo inexabiso elifanelekileyo kuthi.
Ukongeza kwinaliti kunye nomsonto, ezinye izinto zihlala zifuneka ngokuthunga, ezinje ngamaqhosha, uziphu, ithimble, okanye isikere. Imisonto esetyenziswayo enemisonto enemibala eyahlukeneyo iyasetyenziswa. Izinto zingagcinwa zikhuselekile kwaye zicocekile kwibhokisi yokuthunga. Ukuthunga ephupheni kunokuba neentsingiselo ezahlukeneyo ngokupheleleyo zephupha. Sishwankathele ukutolikwa okunokwenzeka okubaluleke kakhulu kuwe apha ngezantsi.
1 Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na othunga okanye othunga into ephupheni, ezinje ngee sequins, ngokwembono ngokubanzi, ufuna ukuhlala ethe rhoqo nakubomi bokwenyani. ubudlelwane obuthembekileyo. Nangona kunjalo, ukuba umsonto uqhawukile ngelixa uthunga, oku kubonisa uxinzelelo kwindawo yokunxibelelana.
Isilumkiso siyacetyiswa ukuba ubona abanye abantu bethunga kwimeko yamaphupha. Apha ukutolikwa kwamaphupha ubona ingozi yokuhleba nokuhleba. Ke ulumke kancinci kwixa elizayo kwaye ungazivezi kakhulu ngawe. Kuyacetyiswa ukuba ulumke ngakumbi, ngakumbi kubantu abangaqhelananga kakhulu nawe.
Ukuba ufikelela kwinaliti yokuthunga ngokwakho, kufanelekile xa uvukile ukumelana ukuzama, kuba oko kuya kukuzisela ubutyebi nodumo. Iinkxalabo ezikhoyo ziya kuba yinto yexesha elidlulileyo. Nabani na othumela iflakisi ephupheni unokulindela ukonwaba kunye nobutyebi kwikamva elikufutshane.
Abafazi abancinci abaphupha ephupheni ukuthunga ingubo baya kuba nye. isigqibo kwimicimbi yothando. Ngaba mhlawumbi ngumbandela wokukhetha phakathi kwamadoda amabini? Emva koko kuyakutyhilwa ukuba ngubani obetha entliziyweni yakho kwaye ngubani oza kuba ngumgqatswa womtshato. Ukuba umntu ophuphayo akakagqibi ukuthunga, oku kuxela umgqatswa omtsha wothando kubo.
Kwababini abatshatileyo abaphuphayo, ithemba ngale meko injengephupha alikho, nangona kunjalo, limnandi kakhulu, kuba liyasongela imbambano ngokunxulumana.
Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolikwa kwengqondo
Xa sithunga into, singayisebenzisa ukwenza into entsha ngokupheleleyo okanye ukulungisa into endala. Ukuba sixakekile silungisa isiqwenga sempahla okanye iqhekeza lelaphu kwilizwe lethu lamaphupha, oku kubonisa, ngokweetoliki zamaphupha ezengqondo, ukuba nathi siphila ebomini. Ukulungisa bayazama. Inokuba bubudlelwane obusongela ngokuqhekeka ngenxa yongquzulwano. Nangona kunjalo, wena ngokwakho zama ukubamba ngokudibeneyo oko bekukudibanisa ngaphambili.
Lixesha kuphela eliza kuxela ukuba oku kuyakuphumelela. Kungenxa yokuba "indawo yokuqhekeza" inokwaphulwa iphindaphindwe okanye ikhule ngokudibeneyo ukuze unxibelelwano phakathi kwabo lube namandla kunangaphambili.
Ukuthunga kunokuthetha ukuba ungazenzela ngokwakho ukwenzakala engqondweni yamkelwe kwaye ngoku ukulungele ukujonga nokuphilisa into eyayibonakala ibuhlungu kakhulu.
Uphawu lwephupha «thunga» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga ukutolika kwephupha, uphawu lwephupha "ukuthunga" kuthetha cura kunye nokukhangela Ingqibelelo.